Strategy First University Human Resources Management – Strategy First University
ဒီဇင်ဘာလ တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ICM Single Subject Diploma in Human Resources Management (Online) သင်ကြားမည့်ဆရာ၊ သင်တန်းချိန်
Class Code : SFU-ICM-HRM-01-01​
Lecturer : Dr Ohnmar Myint , Ph.D. (HRM, Delhi), M. Com, B. Com (Hons, YIE)​
Online Video Starting Date: 25 Nov 2021​
ZOOM Starting Date : 2-Dec-2021​
Day and Time : Thursday (6:00 pm to 8:30 pm)​
Duration :3months ​
သင်တန်းကာလ မှာ တစ်ပတ်ကို (၁) ရက်တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလ (၃)လ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
“သင်ခန်းစာများကို Online Only ဖြင့် သင်ကြား ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။”​
၁။ ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးများမှကြိုတင်ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများကို များကို Online တွင် လေ့လာရမည်။​
၂။ ကြိုတင်လေ့လာပြီးသော ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများကို လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ဆွေးနွေးနိုင်မည့် Face to Face workshop အတန်းချိန်များကိုတော့ သတ်မှတ်ထားသည့်အတန်းချိန်အတိုင်းOnline မှ Zoom ဖြင့်အပတ်စဉ် တစ်ပတ်(၁)ရက်တက်ရောက်ပေးရပါမည်။
မူရင်းသင်တန်းကြေး – ၃၉၅,၀၀၀ ကျပ် + Textbook Fees ​
ယခု Online သင်တန်းကြေး – ၁၈၉, ၅၀၀ ကျပ် + Textbook Fees ​
ကျောင်းသား၊သူ ဟောင်းများအတွက် သင်တန်းကြေး – ၄၀, ၀၀၀ ကျပ် (Save)​
ICM ဘာသာရပ်တူ တက်ရောက်ထားသည့် ကျောင်းသား၊သူဟောင်းများ အတွက် သင်တန်းကြေး ထပ်မံ ပေးသွင်းရန် မလိုဘဲ Program Registration Fees – ၁၀၀၀၀ ကျပ် သာပေးသွင်းရမည် ဖြစ်သည်။​
*သင်တန်းကြေးများကို အရစ်ကျ (၂)ကြိမ်အရစ်ကျခွဲသွင်းနိုင်ပါသည်။​
Mobile Banking (AYA, KBZ, CB, Yoma ) များဖြင့် လွယ်ကူစွာပေးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Lecturer : ဒေါက်တာဥမ္မာမြင့်, B. Com (Hons), M. Com(YIE), Ph.D (
HR Professional တွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပြုမှုပုံတွေကို လေ့လာပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လို ဆွဲဆောင်မလဲ၊ ခန့်ထားမလဲ၊ ဘယ်လို ထိန်းထား မလဲ ဆိုတာတွေအပြင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ မူဝါဒတွေ စည်းကမ်း တွေကို ဝန်ထမ်းတွေ လိုက်နာအောင်၊ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး တိုးတက်မှုရှိအောင် သင်တန်းပေးခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လစာနှင့် ဆုလာဒ်များချီးမြှင့်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အလုပ်သမား သမဂ္ဂဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ အလုပ်သမား ဥပဒေဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် တွေကို သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ Manager များ (HR Manager, Operation Manager, General Manager) ၊ လက်ရှိ Human Resource (HR) နှင့်ပတ်သတ်ပြီး လုပ်နေသူများ၊ Human Resource (HR) field ကို ဝင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိသူများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
HR Professional တွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပြုမှုပုံတွေကို လေ့လာပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လို ဆွဲဆောင်မလဲ၊ ခန့်ထားမလဲ၊ ဘယ်လို ထိန်းထား မလဲ ဆိုတာတွေအပြင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ မူဝါဒတွေ စည်းကမ်း တွေကို ဝန်ထမ်းတွေ လိုက်နာအောင်၊ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး တိုးတက်မှုရှိအောင် သင်တန်းပေးခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လစာနှင့် ဆုလာဒ်များချီးမြှင့်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အလုပ်သမား သမဂ္ဂဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ အလုပ်သမား ဥပဒေဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် တွေကို သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။​
I. People, Organisations and Behaviour ​
Work, organisation and job design​
II. Resourcing and Workforce Planning​
Recruitment and selection​
III. Learning and Development​
Strategic learning and development​
Process of learning and development​
Practice of learning and development​